Olo-Pirenena Nepaley Nosamborina tany Angletera fa Voampanga ho Nanao Heloka Bevava Nandritra Ny Ady · Global Voices teny Malagasy
Olo-Pirenena Nepaley Nosamborina tany Angletera fa Voampanga ho Nanao Heloka Bevava Nandritra Ny Ady	Voadika ny 06 Janoary 2013 9:03 GMT
Zarao: Nampiasa ny ‘fahafaha-mitsara raharaha iraisampirenena’ ny polisy britanika hisamborana kolonely tamin’ny tafika Nepaley monina any amin’ny tanànan’i Sussex atsinanana any Angletera. Voampanga ho nanao fampijaliana [gadra] nandritra ny gidragidra tany Nepal ady an-trano naharitra folo taona (1996-2006) ity lehilahy Nepaley ity. Naharay tranga-na fampihorohoroana nandritra ny fifandirana tany Nepal mihoatra ny 2500 ny Firenena Mikambana ary sambany angamba no nisy Nepaley nosamborina noho ny fampijaliana gadra. Tsy nilaza na inona na inona momba ilay lehilahy ny polisy britanika.
Na dia mbola tsy mazava aza ny antsipirian’ny lazaina ho fandikan-dalàna, ny Scotland Yard – polisy an-tanàndehibe ao Angletera no namoaka fanambarana manao hoe:
“Nisambotra lehilahy manana fifandraisany amin’ny fampijaliana gadra [babo an’ady] natao nandritra ny ady an-trano Nepali ny manamboninahitra avy amin’ny sampan-draharahan’ny polisy an-tanàn-dehibe androany.”
Sarin'ny ady an-trano any Nepal – mpiady Maoista manao fanazara-tena any ambanivohitra lavi-dalana. Sarin'i Bimal Sharma. Copyright Demotix (22/7/2006)
Mazava avy amin’ny fisamborana fa azo tsaraina any Angletera tsy ijerena ny toerana nitrangany ny heloka bevava vita. Niteny ny Human Rights Watch (HRW):
Ny fisamborana ilay kolonelin’ny miaramila Nepali voarohirohy ho nampijaly gadra [babo an’ady] tany Angletera tamin’ny 3 Janoary 2013 no fandefasana fampitandremana ho an’ireo voampanga tamina heloka bevava tena henjana any Nepal sy ny toeran-kafa rehetra fa tsy afa-mandositra ny lalàna mandrakizay ry zareo.
Nanampy i Brad Adams, talen'ny HRW any Azia:
Dingana lehibe amin’ny fampiharana ny Dinan’ny Firenena Mikambana ho fanoherana ny Fampijaliana ny fihetsehan’i Angletera hisambotra manamboninahitry ny tafika Nepali noho ny fampijaliana babo an’ady nandritra ny ady an-trano mahery vaika tany Nepal. Tsy afa-mieritreritra intsony ireny tompon’andraikitra tamin’ny fampijaliana tany Nepal ireny fa tsy tratran’ny lalàna rehefa any amin’ny firenen-kafa.
Manoratra ao amin'ny tranonkalany ny BBC Nepaley izay nitantara betsaka tamin’ity raharaha ity BBC:
“Notarihan’ny Komandin’ny ady amin’ny Fampihorohoroana ny famotorana, izay manana andraikitra hanao famotorana ireo heloka bevava tamin’ny ady sy fanitsakitsahana ny zon’olombelona.”
Nihoatra ny 12000 ny isan'ny olona maty tamin'ny ady an-trano naharitra folo taona tany Nepal nifarana tamin'ny taona 2006. An'arivony tsy tambo isaina ny isan'ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona nandritra izany fotoana izany. Namoaka ‘Tatitry ny Fifandirana’ mahatratra 233 pejy izay naharay tranga-na fampijaliana mihoatra ny 2500 ny Sampa-draharahan'ny Firenena Mikambana Misahana ny Zon'olombelona (OHCHR) .
Kanak Mani Dixit, mpanao gazety Nepaley, Tonia sady talen'ny famoahana ao amin'ny gazety-boky Himal Southasian nandefa taratasy tany amin'ny The Guardian avy any London (nozaraina tao amin'ny facebook taty aoriana):
“Ity fisamborana tany Sussex ity no fanombohan'ny ‘fanombohan'ny fahafaha-mitsara raharaha iraisampirenena’ anenjehana ireo mpiandany tamin'ny fitondrana sy ireo mpioko namotika ny fiaraha-monina sy ny toe-karen'i Nepal tanelanelan'ny taona 1996 sy 2006. Nanamafy ny Sampa-draharahan'ny Firenena Mikambana Misahana ny Zon'olombelona tao amin'ny ‘Tatitry ny Fifandirana tao Nepal’ fa tafakatra avo tahan'ny herisetra nahazo ny olona nandritra ny folo taona, ka tafditra amin'izany ny fampijaliana, fanjavonana, fakana an-keriny, fanolanana ary famonoana olona. Ity fampiharana ny ‘fahafaha-mitsara raharaha iraisampirenena’ ity ihany koa no vokatry ny fandavan'ny antoko politika sy ny Maoista, hanangana fombam-pitsarana tetezamita ao amin'ny firenena tao anatin'ny dimy taona farany hanao fitsarana ara-drariny tokoa sy ny tena fampihavanana marina. Ny nataon'ny fitondrana Maoista ankehitriny aza dia ny nitady famelan-keloka noho ny famonoan'olona nandritra ny ady ka nanafoana ny raharaha fiampangana famonoana olona am-pankahalana an-jatony. Nahanjahanja tavela samirery ireo nihara-pahavoazana.”
Ny BBC no namoaka voalohany ny vaovao ary nosiahan'ny olona an-tserasera nihoatra ny in-jato io tati-baovao nataony io:
@BBCBreaking: Nisambotra lehilahy 46 taona tany Sussex, Angletera, noho ilay lazaina ho nanao fampijaliana babo an'ady nandritra ny ady an-trano tany Nepal ny mpiasan'ny miady amin'ny fampihorohoroana.
Manontany ny rehetra hoe nahoana izao dingana izao no notanterahin'ny polisin'i Angletera, raha efa taona maro lasa izay no vita ny ady an-trano. Araka ny The Independent:
Ilay kolonely, izay tsy notononina anarana, dia nosamborina tamin'ny alalan'ny Fizarana faha-134 tamin'ny Lalàna Fitsarana Ady Heloka Bevava tamin'ny 1988, izay mametraka ny fampijaliana ataon'ny manampahefana ho fandikàn-dalàna na taiza na taiza teto amin'izao tontolo izao no nanaovana izany.
Sambany teo amin'ny tantaran'i Nepal no nisy manamboninahitra nosamborina tamin'ny alalan'ny ‘fahafaha-mitsara raharaha iraisampirenena’ tany amin'ny Tany vahiny noho ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona. Naneho ny ahiahiko tao amin'ny bilaogiko Nepaley aho ny amin'ny hihabetsahan'ny tranga toy izany any Angletera:
Fonenan'ny Nepaley an'arivony izay mety ho maro an'isa amin'izy ireo no nandray anjara tamin'ny ady an-trano tamin'izany fotoana i Angletera. Raha voaporofo ny fiampangana ary hita fa meloka ilay lehilahy, Ahoana ny ho fiantraikan'izany ho an'ireo hafa izay nandray anjara tamin'ny ady an-trano ka any Angletera amin'izao fotoana izao?
Vaovao Farany: Ny Ambasadin'i Nepal any Angletera no nanamafy tany amin'ny Himalayan Times fa ilay lehilahy nosamborina dia ny kolonely Kumar Lama nanompo ny Tafika Nepaley ary nirahina hamita iraka fampandrian-tany any Sodàna eo ambany fanevan'ny Firenena Mikambana amin'izao fotoana. Tany London nisintaka kely famitana iraka ity manamboninahitra ity nandritra ny fetin'ny Krismasy sy ny Taombaovao mba hihaona amin'ny vadiny, izay manana asa ho mpitsabo mpanampy any.
Zarao: twitter facebook reddit googleplusEmail endriny atao pirinty MpanoratraPradeep Kumar Singh
Tantaran'ny Azia Atsimo farany 18 ora izayPakistanaFaritany Balochistan Mahantra indrindra Ao Pakistana, Nahazo Ny Anjara Asa Federaly Ho Azy Ve?
1 andro izayIndiaMifanaritaka amin'ny Fahalalahan-gazety Ao India
2 andro izayBangladeshMety Ho An'ireo Fiteny Rehetra Any Azia Atsimo Ny Rindrambaiko OCR (Optical Character Recognition) An'ny Google
MpanoratraPradeep Kumar Singh